Yi Shan Ge Tea House Retreat (叁寝室) - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguYsg
UYsg ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uYsg iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ngaphandle kwegumbi kuphela, undwendwe lwethu luhlala lwamkelekile ukuba lufumane iseshoni yeti kunye nababathandayo kunye nabahlobo kumgangatho wethu ophantsi weti yekhefi kwaye ushiye indawo yokuhlala ekhumbulekayo apha.
Ndiyayithanda iti, kwaye ndiyathemba ukuba nawe .. Ndijoyine kwiseshoni yeti, ube nengxoxo emnandi kwaye wazi ngakumbi ngeti. Ndiqinisekile ukuba uya kufumana umdla kwaye uyonwabele !!